DISTRIKAN’I TOAMASINA II : Notsenaina tamin’ny fomba makotroka ny depiote Roilahy Jonah
Endrika feno hafaliana no nasehon’ny vahoakan’i Toamasina Faharoa (18 Kaominina) noho ny mbola nahavoafidy fanindroany ny solombavambahoaka Roilahy Jonah, izay natolotry ny vondrona politika IRD. Ny zoma 12 jolay lasa teo no natao ny fitsenana azy. 22 juillet 2019
Niainga avy tao Tsarimasina Rn2 ny fitsenana makotroka natao ary nipaka hatreny amin’ny Che Titi Ivoloina. Tao no namaranana ny fotoana. Nandritra ny lahateny fohy nataony dia nitondra fisaorana feno ho an’ny vahoakan’i Toamasina II iray manontolo tamin’ny fametrahana fitokisana fanindroany hisolo vava azy ireo mandritra ny dimy taona manaraka indray ny depiote Roilahy Jonah.
Nambarany tamin’izany fa mbola vonona hanohy ny asa maha solombavambahoakan’i Madagasikara izy. Mbola betsaka ireo fangatahan’ny vahoakan’i Toamasina II nentina tany amin’ny mpanatanteraka kanefa mbola tsy nivaly nandritry ny fitondrana teo aloha, hoy ny solombavambahoaka. Tafiditra ao anatin’izany ny fanamboaran-dalana, tetezana, famatsiana herinaratra. Izy izay nanamafy fa zanaka an-trano ny tenany ankehitriny fa tsy zana-bady intsony toy ny tamin’ny fitondrana teo aloha. Nanotrona tamin’ny fitsenana ireo mpiray antoko aminy sy ireo sokajin’olona maro samihafa avy amina fikambanana maro.
Tonga nanotrona ihany koa ireo ben’ny tanàna avy amin’ny kaominina miisa 15 amin’ireo kaominina 18 mandrafitra ny distrikan’i Toamasina II. Mbola santatra am-bavarano izao fihaonana izao, hoy ny solombavambahoaka Roilahy Jonah fa mbola ho avy ny fametrahana azy amin’ny toerana dia ny samboady. Nosoritany mazava fa ny olan’ny fananan-tany no tena mbola manjaka sy mampitaraina ny vahoaka Malagasy maro amin’izao fotoana izao ary miaina izany ireo vahoaka ao Toamasina II indrindra ny ao anatin’ny Kaominina Toamasina ambanivohitra.